Van Dijk ayaa ka hadlay soo labashadii mucjisada ahayd ee Barcelona %
Van Dijk ayaa ka hadlay soo labashadii mucjisada ahayd ee Barcelona
By Ramzi Yare	 Last updated May 11, 2019
Virgil van Dijk ayaa ka hadlay kulankii soo labashada ay ugu soo laabteen kooxda Barcelona Aadbaan ugu faraxsanahay wax walba, aan sameynay, gabi ahaanba waan uqalanay midaas, waxaan umaleynayaa in muhiimada ugu weyn ay aheyd in aan aminsaneyn ilaa iyo bilowgii, laga soo bilaabo xitaa kulankii halkaasi kusoo idlaaday gaoonka Camp Nou in aan wali sameen karno badin karno qof walba wuxuu dhahayay ineynan sameen karin balse Weynu tusnay taas.
Waxaan iri kadib ciyaartii Barcelona away iney wax walba ay macquul yihiin, goolasha halkaas kudhasheen dhab ahaantii kama turjumeynin sida ciyaarta ay aheyd, waxey muujinayay sida iney naga gacan sareeyeen balse arinku sidaa waa uu kaduwanaa.
Waxey dhaliyeen gool laad (free-kick) oo cajiib ah, waxey kaloo dhaliyeen goolka labaad oo ahaa mid nasiib ah, kan koobaad na wuxuu ahaa qalad is fahami waa ahaa oo aniga iyo Matip ka yimid.
Waan falaaqeynay in badan taas,wax walba oo fiicanaa, mar kale ayaana sameynay, sido kale si tan oo kale u sameyso waxaad ubaahantahay xoogaa nasiib ah, waana helnay, waxaan dhalinay gool goor hore ah kaas oo nacaawiyay.
Hadii aad aragtid qaabka aan u ciyaarnay, kooxo badan sidaasi uguma adkeen karaan Barcelona, qaabka aan u cadaadinay iyaga, qaabka aan fursadaha ugu abuureynay iyaga, in aan gilinay marxalad aad u adag.
Waa inaad ahaataa geesi, waa inaad qaadata in badan oo qatar difaac iyo weerarka waana sameynay.
Diego Simeone ayaa kala cadeeyayy hadalkii Cristiano Ronaldo & Lionel Messi
Ander Herrera ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo Manchester United xili ciyaareedkan marka …